Shiinaha warshaddii Thermoforming iyo alaab-qeybiyeyaal. Boya
Boya waxay bixisaa boqoradda biyaha iyo filimka filimka oo ah filimka ugu hooseeya ee loogu talagalay baakadaha cuntada, oo ka shaqeyn kara dhammaan noocyada mashiinka heerkulka, iyada oo leh nolol fiican oo loogu talagalay noocyo kala duwan oo raashin ah. Suuqayagu wuxuu daboolayaa Aisa, Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Australia, Europ, Bariga Dhexe iyo Koonfur Afrika .Boya oo rajeyneysa inay kuu noqoto alaab-qeybiyehaaga muddada-dheer adiga oo siinaya alaab tayo sare leh iyo adeeg xirfadeed.
Filimka Top iyo Gunta ayaa kufiican xirxirida waxsoosaar buuxa oo ubaahan waxqabad hoose iyo sare leh waxsoosaar xawaare sare leh, laga bilaabo jiiska iyo hilibka ilaa waxyaabaha rootida, baastada, pizza, iyo sandwiches.
Xalka baakadaha, waxaan haynaa noocyo kala duwan oo qalab ah si aan u daboosho baahiyahaaga iyadoo kuxiran arjiga laxiriira caqabadaha oksijiinta, carqaladaha qoyaanka, dhaqaajinta, iyo dabacsanaanta. Iyadoo 20-sano oo khibrad ah aan leenahay koox farsamo, waxaan ku soo qaadan doonaa dhamaan qodobadan tixgalinta waxaana ku siineynaa xalka ugu fiican adiga!
●Saliid iyo Subag
●Caano iyo cunto qalalan
●Lagu shaqeeyay oo diyaar u ah inay cunaan cuntada
●Hilib, jiis iyo digaag
Alaabta Waxyaabaha Waxqabadka Midabada Laheli Karo
Filim sameynta PA, EVOH, PE, PP, EVASurlyn Shabakad saldhig adag oo xaraash ah. Caddaan, Madow, Jaalle, Buluug, Cagaar, Ilaa 10 midab oo daabacan
Filim aan sameysneyn PA, EVOH, PE, PP, EVASurlyn Webka sare ee aan foomka la samayn karin.
●Guryaha sameynta heer sare ah
●Heerarka ballaaran ee heerarka gudbinta oksijiinta
●Hufnaan aad u fiican inaad soo bandhigto alaabtaada
●Saameyn sare iyo daloolin adkaysi leh
●Waxay ku haysaa xoog heerkulka qabow
●Dareemooyin ka yar markii la xirxirayo alaab adag ama af leh
1.Waa maxay shuruudaha gudbinta?
Waan aqbali karnaa FOB, CFR, CIF.
Ma haysataa alaab kayd ah?
Maya. Dhamaan boorsooyinkeena & filimkeena waa la habeeyay. Waxaan bilaabi doonnaa wax soo saarka kadib markaan helno amarada.
3.Waa maxay dalabka ugu weyn ee filimadaada iyo boorsooyinkaagu?
Waxaa loo adeegsadaa inta badan warshadaha laxiriira cuntada, dawooyinka, baakadaha iyo qalabka waxsoosaarka warshadaha.
Halkee ku taal goobtaada warshad?
Waxaan ku suganahay magaalada Yixing ee gobolka Jiangsu oo hal saac tareen ka socota magaalada shanghai.
Hore: Iska Yaree Bacda iyo Filimka
Xiga: Vacuum beddelo